तिमीले मेरो किन चित्त दुखायौ ? बिनाले बनाएकी रैछन् भिडियो (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > तिमीले मेरो किन चित्त दुखायौ ? बिनाले बनाएकी रैछन् भिडियो (भिडियो हेर्नुस्)
तिमीले मेरो किन चित्त दुखायौ ? बिनाले बनाएकी रैछन् भिडियो (भिडियो हेर्नुस्)
Poonam July 11, 2021 July 12, 2021 भिडियो, समाचार	0
चितवनकी बिना सापकोटालाई प्रहरीले खोजी जारी राखेको छ । प्रेमीसंग मोटरसाइकलमा संगै निस्केकी विना त्यसपछि घर फर्केर आइनन् । उनका प्रेमीले पनि चौविसकोटीवाट विना कता गइन् आफुलाई थाहा नभएको बताएका छन् । उनका प्रेमी भनिएका युवक अहिले प क्राउ परेका छन् । बिनालाई आफ्ना प्रेमी अर्की युवतीसंग पनि नजिकिएका छन् भन्ने आ शंका थियो । यो कुरा अहिले उनका परिवारका सदस्यहरुले भिडियोमा दिएको अभिब्यक्तिवाट पुष्टि हुन्छ ।
अहिले बिनाको टिकटक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भा इ रल भएका छन् । जसमा उनले दुखी हुँदै भिडियो बनाएकी छन् । प्रेममा विश्वास घा त भएको अभिप्रायका भिडियो उनले टिकटकमा बनाएको देखिन्छ । निकै भावुवक देखिएकी विनाले तिमीले मेरो मन निकै धेरै दुखाएका छौ भन्दै टिकटक बनाएकी छन् । यो टिकटक भिडियोवाट पनि उनी प्रेममा निकै दुखी थिइन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
विनाका आमा लगायत उनका परिवारका सदस्य ति अर्की युवतीको घरमा पनि कुराकानी गर्न गएको अघिल्लो एक भिडियोमा बताएका छन् । उनीहरुले यो घटनामा आफुहरुलाई सामेल नगराउन भनेका छन् । आफ्नो घरमा प्रवेश समेत नदिएको भन्दै विनाको आमाले हामी कुराकानी गर्न आएका हौँ म विनाको आमा हो भनेपछि मात्र आफुहरुलाई घर भित्र प्रवे श गर्न दिएको बताएकी छन् ।
श्रीमान बोकेर दाैडिए नारीहरू….
दशैंकै दिन जाजरकोटबाट आयो सबैलाइ रूवाउने यस्तो खबर!
विद्यार्थीसंगै बेन्चमा बसेकि पूर्व युवराज्ञी हिमानीले भनिन्:- ‘मलाई पनि म्याथ र साइन्स गाह्रो लाग्थ्यो’
दुवईमा भएका श्रीमान भन्छन्ः रोजिनाले म’र्नु अघि मलाई भनेकि थिइन ‘म त संसार छोडे है’
मोरङ रोजिना का’ण्डः एउटा मान्छेले राति ढोका ढ’क्ढ’क्या’उँदै थियो, बाहिरियो यस्तो कुरा (भिडियो सहित)
असोज ०५ गते मंगलबार, हेर्नुहोस् यस्तो छ तपाईको राशि अनुसारको भाग्यफल ।
सँखुवासभाको घट्नाले लियो नायाँ मोड, यसरी एकैपटक ४ जना समातिए...